Ihe niile gbasara 3D Printing - Free Hardware | ngwaike efu
N'ichepụta mgbakwunye nwere ọtụtụ akụkụ nke ngwa, ma na mpaghara ntụrụndụ ma na ụlọ ọrụ na teknụzụ. Nke Mbipụta 3D dị ugbu a, ọdịnihu ya na-elekwa anya karịa iji dozie nsogbu ndị ruo ugbu a enweghị ike ime site na usoro mmepụta ihe ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ bụ ezigbo nchọpụta maka ndị hụrụ DIY n'anya na ndị na-eme ya, yabụ ị kwesịrị ịma ihe niile gbasara ha.
Ntuziaka mmalite nke 3D Printing
N'ime ntuziaka a, ị nwere ike ịmụta site na nke kachasị mfe ruo na mgbagwoju anya. Dị ka otu voxel, na-agafe ihe kpatara ya ji bụrụ onye nbipute 3D na otu o si arụ ọrụ, ntakịrị akụkọ ihe mere eme ya, usoro nhazi nke ụdị ahụ ruo mgbe ebipụtara ihe nlereanya ahụ, na-aga na ngwanrọ dị mkpa, usoro nke mmepụta ihe mgbakwunye, na ngwa nwere ike (ụlọ ọrụ, agụmakwụkwọ, ntụrụndụ, nka, ọgwụ,...).
STL na ụdị faịlụ ndị ọzọ
Ozi gbasara usoro STL na ụdị ụdị ndị ọzọ maka ụdị mbipụta, yana ntụgharị enwere ike, na ngwanrọ dị mkpa.
Ụdị ndị na-ebi akwụkwọ 3D na njirimara ha
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara njirimara nke ụdị ọ bụla nke ngwa nbipute 3D dị: teknụzụ, uru na ọghọm nke nke ọ bụla, ma nke maka ụlọ na nke maka ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, bioprinters, pensụl 3D, wdg.
Otu esi ahọpụta 3D onye na-ebi akwụkwọ
Mgbe ịchọrọ ịhọrọ otu ọhụrụ ọtụtụ obi abụọ na-ebilite, na na ntuziaka a otu esi ahọrọ ngwa nbipute 3d ị nwere ike iwepụ obi abụọ gị. Ị ga-amụta ihe ị kwesịrị iburu n'uche na-eme ka a ezi nhọrọ dị ka gị onwe gị mkpa, isi teknuzu e ji mara filament, resin, na ulo oru 3D na-ebi akwụkwọ, ọzọ 3D obibi ọrụ, ahịa, otú wụnye ngwa nbipute na mbụ nzọụkwụ. ibido ibipụta.
Kedu ngwa nbipute 3D dị ọnụ ala ịzụta
Ụfọdụ ndụmọdụ nke ụdị na ụdị nke kacha mma ọnụ ala 3D na-ebi akwụkwọ Kedu ihe ị ga-azụ
Kedu ngwa nbipute 3D maka ụlọ ịzụrụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe maka ụlọ nwere njirimara dị mma, ma na-enweghị ọnụ, ebe a ka ị ga-aga ihe kachasị mma nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D maka ndị na-emepụta ihe na ndị na-enwe mmasị.
Kedu ihe nbipute 3D resin ịzụta
Ụfọdụ n'ime kacha mma resin 3D ngwa nbipute ụdị na ụdị ka ị ghara imehie ihe na nhọrọ, maka ndị na-eme ka filament ndị ahụ ezughị.
Kedu ngwa nbipute 3D ụlọ ọrụ ịzụrụ
Ọ bụrụ na ị ga-eji ya ọkachamara maka telecommuting ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ na ị chọrọ ngwa nbipute 3D mmepụta ihe, ebe a bụ ụfọdụ nke kacha mma.
Filaments maka ndị nbipute 3D na resins
Dị ka ọ dị na ndị na-ebi akwụkwọ, ị ga-azụta katrij ink na toner, na ndị na-ebi akwụkwọ 3D ị ga-achọ ụdị ọzọ. ihe oriri, dị ka filaments na resins. Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ngwaahịa ndị a yana ihe niile ị nwere ike ibipụta na ya.
Akụkụ mapụtara maka ndị nbipute 3D + ntuziaka na-arụzi na nrụzi
Chọta akụkụ niile ị chọrọ maka ngwa nbipute 3D gị: nkwado, akwa, akwa PEI, tapawa thermal, extruders, nozzles, PTFE tubes, stepper motors, ike ọkọnọ, eriri oge, pulleys, bearings, thermistors, coolants, lubricants, oriọna, tankị resin na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ị ga-enwekwa ike ịmụta ka esi edobe ngwa nbipute 3D (calibration, Clean,...) na nsogbu niile nwere ike ime na ngwọta ha.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime kacha mma 3d nyocha nke ị nwere ike nweta maka ọrụ ọkachamara ma ọ bụ ntụrụndụ gị, ka ị nwee ike mbupụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na usoro 3D dijitalụ iji bipụta ya na ngwa nbipute 3D gị, megharịa ya, wdg. Ị ga-enwekwa ike ịmụta àgwà nke ngwaọrụ ndị a, ụdị, otu esi ahọrọ nke kachasị mma maka gị, wdg.
na Ndị na-ebipụta 3D nwere na-eto eto ọnụnọ anyị na otu na eyịghe idụhe ke Nkọwa 3D a na boom. N'ime ụdị a na site na isiokwu anyị, anyị ga-enye gị ozi ọma banyere ụdị ụdị ndị a na-ebi akwụkwọ na mbipụta akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ iji kpebie ụdị ngwaọrụ ị ga-azụ ma ọ bụ mụta otu esi eji ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ozi gbasara mbipụta 3DMee onwe gi obi uto n'ihi na i rutela ebe kacha mma na ntaneti inweta ya ma muta otutu ihe.
por Isaac eme Ọnwa 2 .
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ngwa nbipute 3D resin, na ntuziaka a, ị ga-ahụ ụfọdụ ụdị na ụdị akwadoro na…
Zụta nyocha 3D: otu esi ahọrọ nke kacha mma
Na mgbakwunye na inwe ike chepụta onwe gị geometry nke ibe ahụ ịchọrọ ibipụta na ngwa nbipute 3D gị site na iji ngwanrọ,…
3D ngwa nbipute akụkụ ma rụkwaa
Ndị na-ebi akwụkwọ 3D nwere nsogbu na ndakpọ dị ka akụrụngwa ọ bụla ọzọ, yabụ ị kwesịrị ịma ka esi arụ ọrụ nke ọma ...
Filaments maka ndị nbipute 3D na resin
Toners na katrij ink bụ ihe eji ebi akwụkwọ 2D, agbanyeghị, ndị na-ebi akwụkwọ 3D chọrọ ndị ọzọ…
Nrụpụta ihe mgbakwunye aghọwo otu n'ime ihe ndị na-ekwe nkwa na mpaghara mmepụta ihe. Ụdị mmepụta ihe a...
Kedu ihe nbipute 3D ị ga-azụta maka ụlọ
Anyị na mbụ gosiri ụfọdụ ndụmọdụ na ọnụ ala na-ebi akwụkwọ, ma… gịnị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ka mma? Ya mere, na edemede a ọzọ…
Octoprint: jikwaa ngwa nbipute 3D gị nke ọma
por Isaac eme Ọnwa 3 .
Ọ bụrụ na-amasị gị ibibi 3D, ọ ga-amasị gị ịmatakwu gbasara ọrụ Octoprint. Ngwa ngwa koodu...
A na-enwewanye ụdị na ụdị nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị ọnụ ala, ya mere ọ na-esiwanye ike ịhọrọ ...
Ntuziaka kacha elu: Otu esi ahọrọ ngwa nbipute 3D
Mgbe obi abụọ na-awakpo gị mgbe ịzụrụ, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịmara njirimara kachasị mkpa na ...
Faịlụ STL: Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara usoro a na ihe ndị ọzọ
Ọ bụrụ n’ịbatala ụwa nke mbipụta 3D, n’ezie ị hụla ya n’ihe karịrị otu ebe…
N'isiokwu gara aga, anyị mere ụdị mmeghe na ụwa nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D. Ugbu a ọ bụ oge nke...
Anyị na-enyocha PLA 3D850 na 3D870 sitere na onye na-emepụta ihe na Spain bụ Sakata3D
Anyị na-enyocha ihe ndị kachasị mma nke ihe Smart 3D
Etu ị ga - esi mee ka ngwa nbipute gị 3D dị ọsịsọ n’agaghị enwe ezigbo mbipụta
Anyị nyochara PLA CARBON site na FFFWORLD, filament nke 10
Ha na-ekeputa igwe nyocha buru ibu nke 3D ekele Raspberry Pi
Jiri ejiji mbụ gị gbanye pipụ Pi
Qlone, a kpam kpam free 3D ịgụ isiokwu ngwa
Nyocha nyocha nke XYZPrinting 3D nyocha
Mgbakọ na nyocha nke ngwa obibi 3D na Kit BQ Hephestos
Fidget Spinner, egwuregwu ụmụaka anyị nwere ike ịrụ
Anyị na-enyocha FFFworld filaments: Mgbanwe, PETG, ABS, Metal na PLA
Nyocha nke onye ebi akwụkwọ 3D Legio site na onye ọrụ Spanish bụ Leon 3D
Mee igwe igwe ihe eji eme ihe nke aka gi site na ntinye 3D
Nyocha zuru oke na nyocha nke BQ Witbox 3 2D ngwa nbipute
Ha na-ekepụta ihe eji ebi 3D na onye na-eme kọfị ochie na bọọdụ Arduino
Site na ngwa Leon3D a ị nwere ike ịtụgharị ihe mbupute 3D gị ka ọ bụrụ onye na-egbu ihe na onye na-ese ihe